Amasiko eGuatemala | Iindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | isiko, Guatemale
I-Melika lilizwekazi elityebile kwinkcubeko nakwimbali kwaye icandelo eliphambili linelifa elikhulu leMayan elingaphelelanga eMexico, njengoko abanye bengekhoyo bacinga njalo. Apha kuMbindi Merika kunjalo Guatemale kwaye namhlanje siza kuthetha ngayo amasiko abo.
Ukuba ujonga imephu uyakubona ukuba eli lizwe lincinci, kodwa inyani kukuba ubume bejografi obudibeneyo buzisa imozulu kunye nemimandla eyahlukeneyo. Njengokuba kukho amahlathi ashinyeneyo kukwakho nemangrove kwaye kukho nje indawo ye-a Ilifa lemveli elinamandla el ilifa likameya ikwatsho ngoku.
2 Amasiko aseGuatemala
Ngamaxesha okoloniyali, indawo yaseGuatemala Yayiyinxalenye yoNyango lwaseSpain eNtsha kodwa ngaphambi kokuba ibe yeyakhe UMeya no-Olmec. Inkululeko yafika ngo-1821, xa yaba buKumkani baseGuatemala kwaye kamva yaba yinxalenye yoBukhosi baseMexico bokuqala kunye neFederal Republic yase-Central America, de ekugqibeleni ngo-1874 kwiriphabliki yangoku yazalwa.
Ubomi bezopolitiko kule ndawo yaseMelika buphawulwe ukungazinzi, ulawulo lozwilakhe kunye neemfazwe zamakhaya. Apha konke oko kwaphela ngo-1996 nje kwaye ukusukela ngoko izinto bezizolile, nangona oko kungathethi ukuba indlala nokungalingani kushiye ngasemva.
Njengoko besesitshilo ngasentla inejografi eyahlukeneyo. Inentaba ezininzi, iilwandle kwiPasifiki kunye nemangrove ukuze wonwabe kakhulu Ukwahluka kwezinto eziphilayo oko kuhambelana ngokumangalisayo iyantlukwano kwinkcubeko. Zininzi iilwimi ngaphezu kwamaqela angama-20 eelwimi Ngapha koko, kwinani elipheleleyo labemi abamalunga ne-15 lamawaka abantu.
Kukho abamhlophe, kukho abamnyama, bambalwa kakhulu abantu baseAsia, abantu bomthonyama kunye neemestizo ezininzi, ezi zimbini ziphantse zalingana ngokulinganayo.
Kuba maninzi amaqela eelwimi Ngamnye unesinxibo sakhe esiqhelekileyo nemifuziselo yakhe, izimbo kunye nemibala nangona ngokubanzi kutyheli, kupinki, kubomvu kunye naluhlaza okwesibhakabhaka. Iimpahla zikhanya ngokwenyani apha kwaye ngabalinganiswa abaphambili.
Umzekelo, ezintabeni zeAltos Cuchumatanes, abafazi bedolophu yaseNebaj banxiba izikeyiti ezibomvu ezinamaqela atyheli, benombhinqo kunye neblawuzi yesikwere yemveli ebizwa huipil. Indoda inxibe ibhatyi evulekileyo enomnqwazi wesundu kunye nebhulukhwe.
Kukho ezinye iindawo, umzekelo kwidolophu yaseSantiago enemvelaphi kaMayan, apho i-huipil yabasetyhini imfusa, kunye namabhanti kunye nokuhonjiswa kweentyatyambo nezilwanyana. Inyaniso yile Okukhona uhamba eGuatemala, kokukhona unokufumana iimpahla zesintu. Zonke ziya kuba zintle kuwe.
Kodwa injani iGuatemalans? Kulungile kuthiwa ngokwesiko kakhulu kwaye nangona ililizwe lanamhlanje izithethe zangaphambi kweSpanishi kunye neSpanishi zisekhona nangoku. Umzekelo, iiholide zonqulo zingumzekelo omhle. Yimeko yesikhumbuzo sika imihla yabangcwele kunye neMimoya Engcwele phakathi kukaNovemba 1 no-2, umnyhadala onemvelaphi yangaphambi kweSpanishi omhla wayo wokuqala awukhunjulwa.
AmaGuatemala ahlala ehlonipha abafileyo, kwakudala ngaphambi kobuKrestu, kwaye eneneni yayingabakholoniyali abathatha le mibhiyozo bayenza eyabo yokutsala abantu bomthonyama kumgangatho wabo. Kule mihla iintsapho zisondela emangcwabeni kwaye zishiya ukutya neziselo ngokwesiko elibizwa intlokoa.
Esi siko sesakudala kunye nokwandiswa kwesidlo esibizwa ziqinile eyiSpanish ngakumbi.
AbaseSpain bazisa iinkomo kunye nezilwanyana zasefama kwaye abantu bomthonyama balungelelanisa yonke into. Inyama ebandayo edumileyo ifikelela kwizithako ezingama-50 kwaye ijongeka ngakumbi njengesaladi ebandayo. AbaseSpain nabo bamkela isiko lokuzisa iintyatyambo emangcwabeni kwaye kutsha nje, njengayo yonke inkcubeko ephilayo, i-mariachis ivele emangcwabeni kwaye ngo-Okthobha iHalloween engachazekiyo.
Ukuba iinkulungwane ngaphambi kokuba ulawulo lwezopolitiko luzise amasiko alo, namhlanje inkcubeko kunye nolawulo lwezoqoqosho luzisa olwayo.
Enye iholide yamaKatolika ebhiyozelwayo yile Ngeveki yePasika. Kubhiyozelwa ngokukodwa kugxininiso olukhulu eAntigua apho kukho iinkqubo ezinde kunye neekhaphethi ezintle, ezibizwa umbhoxo wamaplanga, enemibala kunye neziqhamo kunye noyilo lweentyatyambo, athi amadoda omngcelele, enxibe ezimfusa, anyathele. Phambi kokufika kweKrisimesi kukho umnyhadala wesiko onomfanekiso wesiko lokuhlanjululwa: abantu baqokelela yonke inkunkuma endala bayitshise phambi kwendlu yabo ngoDisemba 7.
Eli theko libizwa uvutha usathana.
Kwaye ewe ewe IKrismesi ngomngcelele ongaphezulu, iziqhushumbisi kunye nemiboniso yokuzalwa emabandleni. UDisemba 24 ngu ukubhiyozela iindwendwe ekuthi ngobusuku bangomhla wamashumi amabini anesine kubekho imingcelele enemifanekiso yeNtombikazi enguMariya kunye noMntwana onguYesu nabantwana abanxibe njengabalusi ngeentambula, iicastanet namakhandlela okanye izibane. Ngelixa behamba bacula amaculo eKrisimesi kunye namaqabane kunye nokuhamba nesonka esimnandi okanye itamale bahlala kude kube phakathi kobusuku.
Omnye Umthendeleko odibanisa umKristu kunye ne-pre-Hispanic ngumthendeleko ka-Black Christ wase-Esquipulas. Kuyisiko ekwabelwana ngalo ngu-El Salvador, Honduras kunye neGuatemala kwaye inxulumene noothixo abamnyama base-Ek Chua okanye i-Ek Balam Chua. Kuyenzeka eChiquimula, kumda ophindwe kathathu, ngoJanuwari.
Ezinye izithethe, ezingasenanto yakwenza nobuKristu, zezi Imidyarho yeeribhoni okanye uMdlalo weQabane, apho kucelwa imvume kwabangcwele nakuMama uMhlaba kwaye abakhweli banxibe iimpahla ezimibalabala, izikhafu, iintsiba kunye neeribhoni.
Okokugqibela, ukuba sibeka bucala imithendeleko yenkolo singazibandakanya ne imibhiyozo yoluntu. Sonke sibhiyozela yethu lokuzalwa Kwaye apha eGuatemala uhlala utshisa iirokethi nge-5 kusasa kwaye utye i-tamale kunye netshokholethi kunye nesonka saseFrance ngesidlo sakusasa. Kubantwana, ipati ayinakuphoswa. Kwaye xa kufikwa ekutshateni, into eqhelekileyo, ubuncinci kwiintsapho zesintu, kukuba umyeni acele abasebukhweni isandla sentombi yakhe kwaye kubekho itheko elilodwa le-bachelor, elinye lakhe nelinye yena.
Inyani yile yokuba amazwe aseMelika abenobukho obungaphezulu kweSpain, ngenxa yobutyebi babo kunye nokwenza ubugcisa bezikhundla zobukhosi ezibalulekileyo ezizalise ibhokisi yesithsaba, namhlanje zigcina amasiko amaninzi enkolo nezentlalo athe kwamanye amazwe ahlala elityelwe okanye ukhululeke ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » America » Guatemale » Amasiko aseGuatemala